Iindaba -Ukuhlohla indlela yokutsala ucango- faka isuti yakho ngokwakho
Uthotho lokumisa uchungechunge
I-European Door Stopper Series
Isithuba seAluminiyam yoLungiso loMgangatho weSango lokuMisa
Stainless Door lokumisa Series
Zinc ingxubevange Door Guard Series
Zinc ingxubevange Door lokumisa Series
Zinc ingxubevange Door Stops Series
Zinc ingxubevange Floor Door Stopper Series
Uluhlu lwamavili axhonyiweyo
Uhlobo lweshishini lamaTshayina
Uthotho lweeokie zaseYurophu
Indlela yofakelo yokutsala ucango- faka isuti yakho ngokwakho
Yinto eqhelekileyo eqhelekileyo ukufaka ifayile ye Zinc ingxubevange Door Stop emva komnyango. Ukutsala umnyango omncinci, akukho ndima incinci, inokuwuphepha umnyango ngomonakalo ongafunekiyo, ukusetyenziswa kwangaxeshanye kulunge kakhulu
Indlela yokufaka Zinc ingxubevange Door Stop Ukufunxa kumisela uyilo
Okokuqala, ukuqinisekisa ukufakwa komtshini wokutsala, kufakwe emhlabeni, okanye kufakwe eludongeni. Qinisekisa indawo yokufaka, ubungakanani, kunye nenani lezithuba eziza kusala ngasemva komnyango kufuneka zihambelane nomnqweno. Vula umnyango kwesona sithuba siphezulu sifunekayo, vavanya isiphumo sokutsala umnyango sisengqiqweni, isitshixo somnyango kumgama wokungena kufanelekile ukubeka indawo yomnyango, ebekwe kakuhle emva kokuba umnyango ulungile, vula ucango, uzame owona msebenzi Kusengqiqweni, kubandakanya ukutsalwa komnyango kukuncinci, okanye ngaphandle kancinci, i-Angle ethile yokutsalwa komnyango.
Okokugqibela chonga indawo, beka iithayile zomgangatho, qala ufumane indawo yokumisa emnyango ngepensile kwithayile zomgangatho ukuqinisekisa indawo emnyango, zoba umgca emhlabeni ngepensile, qala uqinisekise indawo yokugqibela yomnyango ovulekileyo, inyathelo elilandelayo ukuqinisekisa indawo yokugqibela yofakelo lokutsalwa komnyango.
Indlela yokufaka Zinc ingxubevange Door Stop ukutsala ukuqala kokufakwa
Umsebenzi olandelayo, kukudlala umbane wombane, kumngxunya wokufaka ucango lokucoca umhlaba. Emva koko fakela isiphelo esisigxina somtshini wokutsala umnyango, qinisa isikrufu esingentla, iswitshi yokutsala ucango yahlulahlulwe yaphela kunye nomnyango, isiphelo esisigxina kufuneka siqinise izikere ngaphambi kofakelo, emva koko nge-Angle loop yangaphakathi utsalo luya kulungiswa emhlabeni okanye eludongeni. Kungumsebenzi olungileyo ukujija isikrufu nge-Angle encinci yangaphakathi. Akukho mava anokuyenza. Emva kokuqinisekisa isikhundla, ukubetha kunye nokudibanisa, umsebenzi olandelayo kukufaka isiphelo sokulungisa emhlabeni.
Qinisa izikhonkwane ngaphezulu kwesiphelo sokulungisa kunye negajethi yangaphakathi yekona kunye neswitshi yokutsala ucango iya kufakwa ngokuzenzekelayo. Ukuphela kokutsalwa komnyango emnyango ukuba nje isikulufu sinokuqiniswa, ukufakelwa komnyango kokufakwa kokukhanya kwesiphelo esisigxina akusasebenzi, kukwafuna ukuba umnyango ufakelwe, isitshixo okanye ukubekwa komnyango, indlela ukuqala ukuvula ucango oluya kwelona likhulu, emva koko ufumane indawo echanekileyo emnyango, qinisa umnyango wokuphela komnyango ngesikrufu.
Indlela yokufaka Zinc ingxubevange Door Stop ukutsala uhlengahlengiso lokugqibela
Ukulungiswa kakuhle kwe-Angle yesiphelo esimiselweyo sokucinywa komnyango kwaye emva koko uyiqinise ngokupheleleyo. Inyathelo lokugqibela kufakelo lwesitshixo sokutsala ucango silungisa kakuhle. I-Angle yokutsalwa komnyango ojikelezayo ilungiswe ngokupheleleyo esiphelweni somnyango kunye nokutsalwa komnyango.